Fandinihantena Sy Fikarohana Ny Antom-pisiana Ao Anaty Tontolom-bolongana Oganda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2018 13:04 GMT
Rebekah Heacock no anarako. Ity no lahatsoratro voalohany amin'ny nisoloako an'i Joshua Goldstein.
Tranga roa vao haingana tao Kampala no niteraka andiana hafatra iray vaovao ahitàna ny tanjon'ny fanoratana blaogy ao Ogandà. Ny voalohany tamin'izany dia ny fitsidihan'ireo Danois efatra mpanao sarimihetsika fanadihadiana izay tonga mba hanadihady ny tontolombolongana Ogandey. Nanontany tena izy ireo hoe sehatra toy inona eo amin'ny mponina no tsinjon'izy ireo avy eny amin'ny mason'ny blaogera Ogandey salantsalany.
Novalian’ny “27th Comrade” tamina tsikera iray tena mavaivay mikasika ireo fomban'ny media mahazatra ao Afrika :
Tao anaty lahatsoratra fanarahamaso iray, nomarihiny fa io karazana fifantohan'ny media io dia “fanadiovana ny atidohan'ny Tandrefana fotsiny amin'ny alalan'ny fampisainana fa isika rehetra dia lava**ody iray avokoa. Tsy isika rehetra, indrindra fa ao Afrika ireo blaogera UG, ary ny Reniko ihany koa.”
Namerina naka ny lohahevitry ny fahàn'ireo media ny Country Boyi, nentanin‘ny resadresaka niarahana tamina mpanao gazety iray izay nanazava ny filàna ny fijerena kokoa ny eo an-toerana ao anatin'ireo vaovao iraisam-pirenena, indrindra fa any anatin'ireo tantara mikasika ny fifandirana ao Oganda avaratra izay maharitra hatramin'ny ampolotaonany maro. Nirotsaka izy handray anjara amin'io fomba fijery io.
Ny tranga faharoa nandrehitra ny adihevitra dia ireo fifandonana tao Kampala tamin'ny volana lasa teo mikasika ny famarotana an'ireo tany ao amin'ny Alan'i Mabira ho ampiasain'ny orinasa iray mpanao siramamy. Amin'ny alalan'ny fanantsiniana an'ireo namany blaogera noho ny tsy nanoratan-dry zareo betsaka mikasika an'ireo fihetsiketsehana mahery setra, nanisy tsindrimpeo i Henry Owera mikasika ny maha-zava-dehibe ny asa fanaovana gazety an'ny olom-pirenena tsotra – na ireo “olom-pirenena” mpila ravinahitra avy any ivelany, na ireo Ogandey – ary mba “hitàna diary momba ny tranga sy ireo toedraharaha” eo amin'ny firenena.
Ny herinandro lasa teo, tany anaty fihaonan'ireo blaogera, niparitaka ny fitadiavana ny antony, tonga hatrany amin'ny “blaogera Ogandey iray tsy fantatra”, izay nanoratra tamin'i Josh tao amin'ny In an African Minute ary nisaotra an'ireo blaogera Ogandey tamin'ny fampahatsiahivana azy tsy nahy an'ireo karazana fiainana marobe ao amin'ny firenena.